Nagarik News - तीजको रहर आयो बरिलै...
निर्देशक प्रकाश थापासँग मेरो राम्रो मित्रता थियो। उहाँका फिल्मका लागि मैले गीत लेखिदिएको थिएँ। आजभन्दा करिब १५ वर्षअगाडिको कुरा गर्दैछु म। एक दिन प्रकाशजी र उहाँको छोरा विजय जावलाखेलस्थित मेरो घरमा आउनुभयो। उहाँ आफूले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म 'कन्यादान'का लागि गीत खोज्दै हिँड्नुभएको रहेछ। भन्नुभयो, 'नयाँ फिल्म बनाउँदै छु। यहाँले दुई–चार वटा गीत लेख्दिनुपर्योह।'
त्यसबेला नेपाली फिल्ममा सर्वाधिक गीत लेख्ने र सबैले गने–मानेका गीतकार थिए, किरण खरेल। प्रकाश थापा र उहाँको जुगलबन्दी निकै गहिरो थियो। 'किरणजीलाई लेख्न नलगाएर यिनीहरू किन मकहाँ आए?' म छक्क परेको थिएँ। र, यो कुरा जान्न पनि चाहेँ। प्रकाशजीले प्रस्ट्याउनुभयो, 'उहाँ (किरण खरेल) ले नै तपाईंलाई लेख्न लगाउनु भनेर सिफारिस गर्नुभएको हो।'
उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मैले फिल्मको सिचुएसन बताउनुस्, म गीत लेखिदिउँ्कला भनेँ। प्रकाशजीले फिल्मकी नायिका (गौरी मल्ल) बालविधुवा हुने, सासूले उनलाई टोकस्ने, तीजका बेला साथीसंगी रमाएको देख्दा उनलाई पनि तीजमा चुरा–पोते, रातो सारी लगाएर नाच्न मन लाग्ने र त्यसको कल्पना गरेको अवस्थालाई चित्रण गर्नेगरी गीत लेखिदिनुपर्ने बताउनुभयो। सारांशमा भन्दा, मैले तीज गीत लेख्नुपर्ने भयो।
रातिको त्यस्तै साढे ९ बजेको थियो होला। कलम–कापी लिएर म गीत लेख्न बसेँ। तीज–गीत! कस्तो शैलीको लेख्ने होला? दिमाग खेलाउँदै गर्दा मैले गण्डक क्षेत्रमा लोकप्रिय तीज–भाकाबारे सम्भि्कएँ। त्यहाँ 'बरिलै'का भाका प्रचलित छन्। 'बरिलै'लाई नै थेगो बनाएर गीत लेख्नथालेँ। त्यहाँका ठेट शब्दावली प्रयोग गर्दा थप आकर्षक हुने ठानी 'सैनी', 'छिड्केरी' आदिलाई गीतमा समेटेँ। अनुप्रासका मामिलामा मैले निकै ध्यान पुर्याखएको थिएँ। यसो गर्ने हुँदा एक ठाउँमा अलि गडबड भएको छ। अन्तिम हरफको अन्तिम लाइनमा हर्ताको सट्टा हर्त भनिएको छ। व्रतसँग अनुप्रास मिलाउनका लागि त्यस्तो लेखिएको हो। गीतसंगीतको मामिलामा यस्तो चल्छ पनि।
लेखन कार्य त सकियो। प्रकाशजीलाई यसको गायक र संगीतकार को हो भनिसोध्दा मनोहरी सिंह र सुषमा श्रेष्ठको नाउँ बताउनुभयो। उहाँहरू दुवै भारतीय मूलका हुनुहुन्छ। भारतीयलाई नेपालको 'तीजे–लोकभाका'बारे के थाहा होला र भनी मैले आफ्नै स्वरमा यो गीतलाई टेपमा रेकर्ड गरेर रफ–डमी पठाइदिएँ। प्रकाशजीले बम्बई लगेर यसको रेकर्डिङ गराउनुभयो। उताबाट आएपछि गीत अलि फरक शैलीको भएको मैले महसुस गरेँ। मनोहरिजीले मेरो लयलाई केही इम्प्रोभाइज्ड गर्दिनुभएछ। गायिका र बम्बईका कोरसको स्वर पनि मिठो लाग्यो मलाई।
'कन्यादान' फिल्म रिलिज भएपछि यो गीत बाहिर आयो। नेपालका चर्चित नायिकाले असाध्यै राम्रो नृत्य गर्नुभएछ यसमा। गीतलाई स्रोताले कति रुचाए, त्यो त भनिराख्नैपर्दैन। अहिलेसम्म पनि तीज आउनासाथ यो गीत गुञ्जायमान हुन्छ। तीजका लागि त 'राष्ट्र गीत' झैँ भएको छ यो। गीतले नौ डाँडा काटेर गएका चेलीबेटीको पुनर्मिलनको अवसर– तीज, यसको तामझाम आदिबारे बताएको छ। 'तीजको रहर' जति चर्चित भयो, यसका शब्दका बारे पनि उति नै चर्चा भए। कसैले 'रहर'लाई 'लहर' भनेर गाए, कसैले सैनीको अर्थै बुझेनन् रे! महिला मितिनीलाई गण्डक क्षेत्रमा सैनी भन्छन्।
यो गीतसँग सम्बन्धित एउटा हास्यास्पद कुरा पनि छ। नेपालका केही गायकगायिका भनाउँदाले यो लोक लयलाई रिमिक्स गरिदिएछन्। त्यसमा कति गलत गाइएको छ भने 'दामली' लाई 'नाम लिई' भनेर अर्थ न बर्थ बनाइएको छ। कोही भने दशकौँ अगाडिको यो गीतमा 'मैले संगीत भरेको हुँ' भन्दै छाती फुलाइरहेका छन्। अझै के–के देख्नु सुन्नुपर्ने हो, म त छक्क पर्छु!
रचना : चेतन कार्की
संगीत : मनोहरि सिंह
गायन : सुषमा श्रेष्ठ (पूर्णिमा)
फिल्म : कन्यादान
पोस्टर फिल्मको आत्मा हो : अामिर खान
'धूम थ्री', 'सत्यमेव जयते' र अहिले 'पीके' मा आमिर खानले आफ्नो 'आर्ट अफ सिक्रेसी' लाई कायम गरेका छन्। फिल्म प्रमोसनमा पनि उनी कमै बोलिरहेका छन्। 'गोप्यता राख्नु आवश्यक छ, नत्र...
चार महिनामा २२ करोडको ठगी
फ्री भिसा, फ्री टिकट भएको मुलुकमा कामदारबाट म्यानपावरले अनधिकृत रूपमा रकम उठाइरहेका छन्। पाँच हजार लाग्ने सेवा शुल्कमा १५ हजार रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। ८० हजार लाग्ने मलेसियामा डेढ लाख रुपैयाँ...
के गर्दैछन् नेइमार?
विश्वकपका क्रममा पिठ्यूँको हाड भाँचेका ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेइमार के गर्दै होलान् भनेर कसैले प्रश्न गरेमा अस्पतालमै उपचार गराइरहेका होलान् वा आराम गरिरहेका होलान भन्ने उत्तर पाइने छैन।